Madheshvani : The voice of Madhesh - उपेन्द्र यादवको कदम एकपक्षीय, अराजक र गुटगत
उपेन्द्र यादवको कदम एकपक्षीय, अराजक र गुटगत
० जनता समाजवादी पार्टी नेपालभित्र एउटाले अर्कोलाई कारबाही गर्ने भइरहेको होडबाजीलाई जनताले कसरी बुझ्ने ?
— जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई उपेन्द्र यादवले कारबाही गरिएको भन्ने कुरा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । खासगरी आदरणीय महन्थ ठाकुरजी पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र उहाँले अगुवाई गरेको र आह्वानमा भएको मधेश–थरुहट आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र सबै आन्दोलनसँग सम्बन्धित माग मुद्दाहरु सम्बोधनका लागि उहाँले अग्रसरता देखाउनुभएको छ । त्योअनुसार कतिपय माग मुद्दाहरु अहिलेको सरकारबाट सम्बोधन पनि भएको छ । मधेशी र थारुहरुको मुद्दा सम्बोधन हुन लाग्यो भनेर अहिलेको परिस्थितिमा उपेन्द्र यादवबाट जुन गैरराजनीतिक चरित्र देखाइएको छ, यसले संकट अवस्था सिर्जना गरेको छ । उपेन्द्र यादव व्यक्तिगतरुपले एउटा कुण्ठाग्रस्त भएर १८ महिना केपी यही ओली नेतृत्वको सरकारमा बसेर देशविदेश शयर गर्नुभयो, आर्थिक लाभ लिनुभयो तर कुनै काम गराउन सक्नुभएन । अहिले जुन कामहरु भइरहेका छन्, त्यो उहाँलाई असह्य भएर पार्टीमा वितण्डा मचाउन खोज्नुभएको छ । त्यसैले यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
० तपाइँहरुले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्नुभएको थियो, यस्तै हुन्छ त वैकल्पिक शक्ति ?
— जसपाभित्र रहेका तमाम संघर्षशील नेता कार्यकर्ता जो मधेश, थरुहट, आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा योगदान पु¥याएका छन्, जो समानताको अधिकारका लागि लडिरहेका छन् ती साथीहरुसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ कि आफ्ना साथीहरुमाथि मुद्दा लागेका, जेलमा छन् भनेपछि एउटा पार्टी अध्यक्षको दायित्व हुन्छ कि तिनीहरुको माग र मुद्दा सम्बोधन गराऔं र हुनुपर्छ भन्ने ढंगले अगुवाई गर्ने । अहिले उपेन्द्रजीले गैरराजनीतिक चरित्र देखाइरहनु भएको छ । उहाँबाट जुन कामको थालनी भयो त्यसमा पार्टीभित्र अराजकता हुँदैन भनेर महन्थ ठाकुरजीको तर्फबाट पनि कारबाही अगाडि बढेको हो । त्यसले गर्दा जसपाभित्र एउटा विग्रह देखिन्छ । यसले गर्दा विभेदमा परेका नागरिकहरु खासगरी मधेश र थरुहटको जनसमर्थनले बनेको यो पार्टी हो । मधेश आन्दोलनबाट बनेका नेता उपेन्द्र यादवले आज मधेश र थरुहटका जनताको अधिकारलाई संकुचित गर्ने, आफ्नै आन्दोलन नेता कार्यकर्ताहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, तिनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न हुन नदिने भूमिका खेलिरहनु भएको छ । यसले हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । के कारणले उहाँ यस्तो गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ, कसको उक्साहटमा गर्दै हुनुहुन्छ, कसको मनोवल उहाँ पूरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।
० दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई हटाएको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्, आधिकारिक जसपा कसलाई मान्ने त ?
— जसपाको आधिकारिकताको सवालै होइन । राजनीतिक जीवनमा सबैभन्दा ठूलो आधिकारिकता भनेको जनताले भोगिरहेका समस्या र मुद्दाहरु र जनता कोसँग छ ? कसले ती मुद्दाहरुको अगुवाई गर्छ र जनताको समर्थन कोसँग छ, यो सबैभन्दा ठूलो विषय हो । हामीले जहिले पनि राज्यद्वारा वहिष्करणमा पारिएका र उपेच्छित जनसमुदायको अधिकार र पहिचान स्थापित गर्ने उद्देश्यले सधै आफ्नो माग मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको सर्वविदितै छ ।
० उपेन्द्र यादवले गरेको कारबाही गलत र महन्थ ठाकुरले गरेको कारबाही सही कसरी हुनसक्छ ?
— २०७२ साल असोज ३ गते अपूर्ण संविधान जारी भए देखि नै जबसम्म हाम्रो माग मुद्दा पूरा हुँदैन तबसम्म न चनावमा भाग लिने न सरकारमा भनेर आम जनसमुदायसँग प्रतिवद्धता थियो । जस अनुसार जबसम्म संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा अगाडी बढाइएन तबसम्म हामी स्थानीय तहको दुई चरणको चुनावमा भाग लिएनौं तर उपेन्द्रजीहरु प्रतिवद्धताबाट भागे । त्यति मात्रै होइन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावपछि हामीले हाम्रा माग मुद्दा सम्बोधन गर्ने सर्तमा सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थनमा गर्यौं र एक वर्षसम्म पनि माग सम्बोधन नभएपछि समर्थन फिर्ता लियौं तर उपेन्द्रजी सत्तालोलुप भएर सरकारमै सहभागी भए र एउटा सिन्कोसम्म भाँच्न सकेनन् र जबसम्म अपमानजनक रुपमा तिनलाई सरकारबाट लखेटिएन तबसम्म सत्ताको रसोस्वादन गरिरहे ।
० उपेन्द्र यादवले जसरी सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ, यसमा पनि त तर्क छ नि ?
— पछिल्लो घटना क्रममा प्रधानमन्त्रीजीसँगको व्यक्तिगत कुण्ठा र पूर्वाग्रहले गर्दा आज वर्षोदेखिको सम्बोधन गराउन बाँकी रहेको माग मुद्दाहरु सम्बोधन गराउने सन्दर्भमा १३९ जना आन्दोलनकारीहरुको मुद्दा फिर्ता गरिएको छ तथा केही मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियामा छ, नागरिकताको सन्दर्भमा संविधान जारी भएको मितिदेखि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुले नागरिकता पाइरहेका थिएनन् जसले गर्दा शिक्षा, रोजगारी लगायत राज्यबाट पाउने सुविधाबाट बञ्चित थिए जसलाई अध्यादेश मार्फत सम्बोधन गरिएको छ, संविधान संशोधनको सवालमा उपेन्द्रजीले बनाउन नसकेका संविधान संशोधन कार्यदल बनाइएको छ र छिटै यसको परिणामहरु पनि देखिने छ तथा अन्य पनि बाँकी रहेका मागहरु सम्बोधन गराउन पहल भइरहेको छ । तर आफूले जस नपाउने तुच्छ सोच र उधारो सहमति गरी भोलिको दिनमा सत्तालिप्साको अभिलासा पूरा गर्ने बाटो नै बन्द हुने देखेर आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकाक्षांका लागि राजनीतिक आवरण दिई फेरि जनतालाई धोका दिने कार्य शुरु गर्न खोजेका छन् ।
० केपी ओली सुरुदेखि नै संघीयता र संविधानका विरोधी मान्छे हुन्, त्यसलाई साथ दिएकोले महन्थ ठाकुरसहित चारलाई पार्टीबाट निकालिएको उपेन्द्र यादवको तर्क छ नि ?
— यदि उपेन्द्र यादवलाई यो कुरा यति राम्रोसँग थाहा थियो भने उही ओली सरकारमा किन मन्त्री बन्न जानुभयो त । १८ महिनासम्म मन्त्री बन्नुभयो, विदेश भ्रमण गर्नुभयो र विदेश भ्रमणमै रहेको बेला उहाँलाई कानूनमन्त्रीमा झारियो । सबैभन्दा बढी माया केपी ओलीले मलाई गर्नुहुन्छ भन्ने मान्छे त्यही उपेन्द्र यादव होइन ? भनेपछि त उपेन्द्र यादवलाई यो नैतिकता छ ? आज मधेशका जनताले सबै कुरा बुझिसकेका छन् । उपेन्द्र यादवले अहिलेसम्म के–के गरे सबैलाई थाहा छ । कुन–कुन मुद्दाको सम्बोधन गरायो त्यो पनि थाहा छ । त्यसैले यस्तो बेतुकको कुरा गर्न उहाँलाई सुहाउँदैन । केपी ओली संघीयता र संविधान विरोधी थिए भने उसको सरकारमा नगएको भए हुन्थ्यो नि ।
० उपेन्द्र यादवसँग टक्कर लिने नेताहरुको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त भएको भन्ने तर्कहरु उनका समर्थकहरुले गर्दै आएका छन् नि ?
— उपेन्द्र यादवको पार्टी राति फुट्न लाग्दा भौतारिँदै हिडेको कुरा सबैलाई थाहा छ । त्यो रातको घटना कसैसँग लुकेको छैन । उपेन्द्रसँग छुट्टिएर जाने होइन, पार्टीमा निकाल्छौं । जसपामा उपेन्द्र यादव सुध्रेर आउनुप¥यो या त अर्कै पार्टी गठन गरोस् । महन्थ ठाकुरको राजनीति समाप्त गर्न उपेन्द्रले अर्को जन्म जन्मिनुपर्छ ।
० रातारात एकीकरण गर्नुपर्ने महन्थ ठाकुरलाई किन आवश्यकता महसुस भयो त ?
— त्यो बेला हामीले उत्पीडित र शोषिक वर्ग समुदायको अधिकारका एकजुट हुनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ एकीकरण गर्न पुगेका थियौं । उपेन्द्र पार्टी विभाजन जोगाउनुभन्दा पनि जनभावनालाई कदर हामीले एकीकरण गरेका थियौं । तर अहिले हामीलाई लागिरहेको छ कि सर्पलाई दुध खुवाएको जस्तो अनुभव भइरहेको छ । हामीले उहाँको पार्टी जोगाइदियौं तर हामीलाई थाहा थिएन कि पछि यस्तो काम गर्नुहुन्छ भनेर । उहाँले विभिन्न तानावाना बुन्नुभयो, षड्यन्त्र मात्रै गर्नुभयो, गुटगत राजनीतिमै रुम्लिनुभयो । उहाँ एकपक्षीय र अराजक ढंगले हिंडिरहनुभएको छ, राजनीतिक चरित्र नै देखिएको छैन । त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरेपछि पार्टीले उहाँमाथि अंकुश लगाउँछ नै । म अध्यक्ष भएँ भनेर जे मन लाग्छ त्यहीं गरेर हिंड्न मिल्दैन नि । त्यसैले उपेन्द्र यादवको स्वेच्छाचारिताको विरुद्धमा पार्टीमा आवाज उठेको छ र पार्टीले कारबाही गर्छ । उहाँ जस्तो मानिससँग राजनीतिक जीवनमा काम गर्न गाह्रो छ । त्यसैले शायद होला, विगतमा उहाँको पार्टी ८÷१० पटक फुटेको ।
० तपाइँहरुको संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले त जसपाका नेता कार्यकर्ताहरुलाई भेंडा र बाख्रासँग तुलना गर्नुभयो नि ?
— बाबुरामजीको कुरा गरेर साध्य छैन । उहाँले संविधान निर्माण गर्नुभयो, आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, थारुलगायत सबैका लागि प्रतिगमनकारी संविधान निर्माण गर्नुभयो । संवैधानिक समितिको उहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो, हामीले एक हप्ताको समय मागेका थियौं तर उहाँले दिन मान्नुभएन । अहिले सबैले हेरिरहेका छन् कि मधेशीलाई सामाजिक सञ्जालमा होच्याउने खालका ट्वीट गर्नुहुन्छ । उहाँमा मानसिक विचलन आइसकेको छ । जसरी उहाँले भेंडा भेडासँग र बाख्रा बाख्रासँग भनिरहनुभएको छ भने उहाँ के हो ? भेडा हो कि बाख्रा हो ? उहाँ किन भेडा बाख्रासँग आउनुभएको थियो त ? भनेपछि यो फिरन्ते नेताको मानसिक असन्तुलित अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँको बारेमा म टिप्पणी पनि गर्न चाहन्न ।
० जसपाभित्र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादव बहुमतमा हुनुहुन्छ भन्ने उहाँहरुको दाबी छ नि ?
— यो दाबी गलत हो । उहाँहरु आफ्नै ढंगले भन्नुभएको छ, यसको परीक्षण भएको छैन ।